Anjozorobe : zandary iray voarohirohy ho nividy fiara Mazda halatra | NewsMada
Anjozorobe : zandary iray voarohirohy ho nividy fiara Mazda halatra
Voasambotry ny zandary avy ao amin’ny sampana fikarohana heloka bevava eny Fiadanana, ny herinandro teo ireo tambajotrana mpangalatra fiara Sprinter sy Mazda. Very tany Moramanga ilay fiara Mazda ka tany Anjozorobe vao hita. Zandary iray voarohirohy ho nividy ity fiara halatra ity…
Voalazan’ny fampitam-baovao avy amin’ny lehiben’ny zandary avy ao amin’ny sampana fikarohana heloka bevava, ny Kly Randriamanantena Pascal nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety, omaly, nitrangana halatra fiara Sprinter teny By-Pass Ambohimangakely, ny 13 aogositra 2017 lasa teo. Mody hoe hanofa ilay fiara ireo mpangalatra kanjo nangalarin’izy ireo ilay fiara rehefa avy nomena ranomboakazo misy fanafody fampatoriana ny mpamilin’ilay fiara sy ny mpanampiny azy. Nametraka fitoriana teny amin’ny zandary ny tompony ka niroso tamin’ny fikarohana avy hatrany izy ireo. Vokany, tratra tany Ambositra ilay fiara Sprinter niaraka tamin’ireo olona dimy voarohirohy ho tompon’antoka tamin’izany. Ramanahadray Jean Bernardin antsoina hoe Bera no tena lehiben’ireo mpangalatra mivondrona ao anatina tambajotra.
Fa mbola ireto tambajotrana mpangalatra fiara ireto koa no tompon’antoka tamin’ny halatra fiara Mazda iray manao taksiborosy Tanà – Moramanga. Voalazan’ny fanadihadian’ny zandary hatrany fa tany Anjozorobe no hita ilay fiara ary mbola ireo tompon’antoka tamin’ilay halatra Sprinter ihany koa no niketrika ity halatra fiara Mazda ity. Vehivavy iray sy lehilahy efatra no ao anatin’ilay tambajotrana mpangalatra fiara Sprinter sy Mazda ireto.
Nohamafisin’ny teo anivon’ny seraseran’ny zandarimariam-pirenena kosa fa zandary ilay nividy ilay fiara Mazda tany Anjozorobe. “Ao anatin’ny fanadiovana tanteraka ny zandarimariam-pirenena ka tsy mahamenatra ny milaza izany ary efa natolotra ny polisim-pirenena izy satria efa nisy fitoriana momba ity halatra Mazda ity tany amin’ny polisy”, hoy ny lehiben’ny seraseran’ny zandarimariam-pirenena, ny chef d’escadron, Andrianarisaona Herilalatiana. “Raha misy olona efa nivarotan’i Bera sy namany fiara halatra, iangaviana izy ireo mba hanatona aty aminay mba tsy hovoasaringotra amin’izany. Efa miara-miasa amin’ny sampandraharaha mpanome ny laharan’ny fiara rahateo ny zandarimaria”, hoy kosa ny Kly Randriamanantena Pascal.